Baadhitaanka Maskaxda - Xarunta Agabka & Naafada (ADRC)
Waa maxay Baaritaanka Maskaxda?
Baadhitaanka Maskaxda, oo mararka qaar loo yaqaanno "Memory Screen", waa saddex hawleed oo gaagaaban oo tijaabinaya sida qaybaha kala duwan ee maskaxdaadu u shaqeeyaan. Maahan aalad lagu ogaado cudurka, laakiin waa mid xasaasi ah oo ku filan in lagu ogaado isbeddelada khiyaamada ee xusuusta iyo garashada.
Waxaan kugula talineynaa in qofkasta oo ka weyn da'da 60 sano uu helo baaritaanka Maskaxda sanadkiiba. Tani waa hab fiican oo lagu helo aasaasiga - xitaa haddii aadan wax walwal ah qabin! Wac ADRC (920) 448-4300 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Maxaan ku sameeyaa natiijooyinka?
Oggolaanshahaaga, waxaan awoodnaa inaan natiijada fakiskaaga ugu fakarno takhtarkaaga. Tani waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo lagu hayo gundhigga, xitaa haddii aadan wax walaac ah qabin.
Haddii natiijooyinkaagu muujiyaan walaac, inaad u geyso takhtarkaaga waxay noqon kartaa bilaw wadahadal fiican si loo soo bandhigo welwelkaaga. Natiijada walaac micnaheedu maahan in si otomaatig ah loola jeedo xannibaadda, waallida joogtada ah. Baarahaagu wuxuu mari doonaa waxoogaa waxbarasho ah inta lagu guda jiro ballankan sababaha sababi kara calaamadaha, calaamadaha digniinta, iyo sida maskaxdaada looga dhigo mid firfircoon oo caafimaad qabta.
Kadib Baaritaan kasta oo Maskaxda ah, Macaamiisha waxaa wax lagu baraa sababaha kale ee suurtagalka ah ee waallida-sida astaamaha, 10ka astaamaha digniinta, iyo waxqabadyada loogu talagalay caafimaadka maskaxda wanaagsan. Waxaad sidoo kale heli kartaa macluumaad ku saabsan halka laga aadayo tijaabooyin dheeraad ah haddii loo baahdo ama macluumaad badan oo guud oo ku saabsan waallida
Baaritaanka Maskaxda waa a free adeegga ay bixiso ADRC. Naga soo wac si aad ballan uga samaysato (920) 448-4300.
Xaashida Baaritaanka Maskaxda